China Suction Catheter orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Kangyuan
• Vita amin'ny fitsaboana tsy misy poizina - kilasy PVC, mangarahara sy malefaka.
• Ny maso an-daniny vita tsara sy ny tendrony mihidy no tsy dia maratra amin'ny fonontsenan-tsiranoka moka.
• Misy mpampitohy karazana T sy mpampitohy conical.
• mpampitohy misy loko miloko mba hamantarana ireo habe samihafa.
• Afaka mifandray amin'ny mpampifandray Luer.
Fonosana: 100 pcs / boaty, 600 pcs / baoritra
Haben'ny boaty: 60 × 50 × 38 cm
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny faniriana sputum klinika.
Ity vokatra ity dia misy catheter sy mpampitohy, catheter dia vita amin'ny fitaovana PVC kilasy fitsaboana. Ny valin'ny cytotoxic an'ny vokatra dia tsy mihoatra ny kilasy 1, ary tsy misy ny fahatsapana na ny fientanam-po amin'ny fanentanana mucosal. Ny vokatra dia ho foana ary, raha voadio amin'ny éthilène oxide, dia tsy hamela mihoatra ny 4mg.
Toro lalana hampiasaina
1. Araka ny filan'ny klinika, safidio ny masontsivana mety, sokafy ny kitapo fonosana anatiny, zahao ny kalitaon'ny vokatra.
2. Ny tendron'ny fantsom-panafody sputum dia nampifandraisina tamin'ny catheter suction pressure ratsy teo afovoan'ny klinika, ary ny faran'ny catheter suction sputum dia nampidirina tsimoramora tao am-bavan'ny marary tao anaty arabe mba hitrandrahana sputum sy tsiambaratelo avy amin'ny trachea.
Tsy nisy contraindications hita.
1. Alohan'ny hampiasana azy dia tokony ho voafantina arakaraka ny taona sy ny lanja ny famaritana marina ary tokony hosedraina ny kalitaon'ny vokatra.
2. Azafady mba zahao tsara alohan'ny hampiasana azy. Raha vokatra tokana (feno entana) no hita misy ireto fepetra manaraka ireto dia voarara tanteraka ny fampiasana ：
a) Daty lany datin'ny fanamorana ；
b) Ny fonosana tokana an'ny vokatra dia simba na misy raharaham-bahiny.
3. Ity vokatra ity dia ampiasaina indray mandeha amin'ny klinika, ampiasain'ny mpiasan'ny fitsaboana ary rava aorian'ny fampiasana azy.
4. Amin'ny dingan'ny fampiasana dia tokony hanara-maso ny fampiasana ny vokatra ara-potoana ny mpampiasa. Raha sendra misy ny lozam-pifamoivoizana dia tokony hitsahatra tsy hampiasa ny vokatra eo noho eo ny mpampiasa ary asaivo miatrika izany araka ny tokony ho izy ny mpiasan'ny fitsaboana.
5. Ity vokatra ity dia sterilization oxide etilena, vanim-potoana fanamainana mandritra ny dimy taona.
6. Simba ny fonosana, noho izany voarara ny fampiasana.
Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka, maizina ary maina, ny mari-pana dia tsy tokony ho mihoatra ny 40 ℃, raha tsy misy gazy manimba sy rivotra tsara.
[daty famaranana] Jereo ny labozia fonosana anatiny
[Olona voasoratra anarana]
Mpanamboatra: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
Teo aloha: Kitapo Tube Endotracheal azo ampiasaina
Manaraka: Saron'ny fidirana amin'ny suction-evacuation ho an'ny fampiasana tokana
orinasa mpitroka katesizy
mpanamboatra katesizy mitsoka
mpamatsy catheter suction
Sarontava fanatoranana fanary azo ampiasaina
Làlan-tsoratr'i Laryngeal Mask izay azo ampiasaina
Kitapo Tube Endotracheal azo ampiasaina